Maalinta: Meey 23, 2020
Wasiirka Gaadiidka iyo Kaabayaasha dhaqaalaha Adil Karaismailoğlu wuxuu sheegay in xuduudaha xuduudaha iyo xayiraadaha lagu soo rogay xaddiga noocyada cusub ee dillaaca cudurka coronavirus ay leeyihiin saameyn badan oo xagga dhaqaalaha ah. Markan fayrasku waa Dowladda [More ...]
Wasiirka Gaadiidka iyo Kaabayaasha dhaqaalaha Adil Karaismailoğlu: Iibinta tareenada xawaaraha dheereeya waxay bilaabmi doonaan maalinta labaad ee bisha Ramadaan. Si kastaba ha noqotee, tigidhada tareenka ayaa inta badan laga heli karaa arjiga moobaylka iyo websaydhka ama kuleylka lama xidhiidho. [More ...]
Dowladda Hoose ee Magaalada Ankara ayaa sii wadata howlgalka 7/24 ee ah bandowga lagu soo rogay bandowga taas oo qayb ka ah la dagaallanka faafitaanka cudurka coronavirus. Waaxda Sayniska, oo qabatay 16 kun 19 tan oo kalfadhiga loo yaqaan 'asphalt casting' May 23-302, [More ...]
Xperia Hotels waxay u yimaadeen marxaladda ugu dambeysa inay maalgashadaan Erciyes. Duqa Magaalada Dr. Memduh Büyükkılıç wuxuu ku dhawaaqay in hoteelka, oo soo gaadhay marxaladda ugu hooseysa, uu yeelan doono 550 sariirood. Duqa Magaalada Dr. Mamdouh [More ...]
Dawlada Hoose ee Magaalada Kocaeli waxay siin doontaa gaadiid bilaash ah muwaadiniinta heeganka ah inta u dhaxaysa 52 - 07.00, 09.00 - 17.00 oo leh 19.00 wado oo bas ah. Sabti, Meey 23,25 iyo 26 [More ...]
Ayaa Laga Helay Maamulka Guud ee TCDD Tan iyo Markii La Aasaasay? 1923 km oo ah 1960 km tareenka loo dhisay intii u dhaxeysay 3.578-3.208 waa kuwa la dhameystiray illaa 1940. Mudadaas, xarunta waxay ku xirneyd Wasaaradda Gaadiidka iyo [More ...]
Ali İhsan Uygun wuxuu ku dhashay Ordu bishii Abriil 12, 1966. Sanadkii 1987, wuxuu ka qalin jabiyay Jaamacada Farsamada ee Istanbul, kuliyada korontada iyo korontada, waaxda injineeriyada korontada. Sannadkii 1988, Kuliyadda Jaamacadda Jaamacadda ee Kuliyadda Dhaqaalaha Ganacsiga Maamulka Ganacsiga [More ...]
Markay noqoto adeegyada gaadiid ee xafiiska, waxaan dhihi karnaa koox shirkad gaadiid ayaa tan u weeciyay qayb iyagoo bixiya adeegan. Caannimada oo lagu gaadhay adkaynta adeegyada gaadiidka guryo-ka-guur ayaa hadda xafiisyada wareegaya. [More ...]
Wasiirka Warshadaha Difaaca Madaxweynaha. Dr. Ismail Demir, matoorrada farsamada difaaca STM difaaca iyo ganacsiga AŞ waxay u maleynayaan taangiyo ay soo qabanqaabisay barnaamijka wadahadalka fiidiyowga ee 'STM Think Tech', "Kovid-19 ee Turkiga iyo Geedi socodka iyo wixii ka dambeeya [More ...]
Ururka Dalxiiska Adduunka (UNWTO) ee Qaramada Midoobay ayaa daabacay barometer-ka May 2019, kaasoo ay ku jiraan xogta 2020. In kasta oo Turkigu mar labaad marti-galiyay dalka 6-aad ee ugu booqashada badan adduunka iyo laba dakhliyada dalxiis [More ...]
Wasiirka Qoyska, Shaqada iyo Adeegyada Bulshada Zehra Emerald Selcuk, Covidien 19-sano ayaa ku dhacday si loogu taageero muwaaddiniinta baahan ee lagu bilaabay hoggaanka Ra'iisul Wasaaraha Recep Tayyip Erdogan bishii Maarso 30, "Waxaan ku Filannahay Turkiga" [More ...]
Waxay sii wadaa inay la kulanto baahiyo badan oo muwaadiniinta naafada ah iyadoo loo marayo Wasaaradda Qoyska, Shaqada iyo Adeegyada Bulshada, Hay'adda Amniga Bulshada iyo İŞKUR. Iyadoo la fulinayo mashaariicda ay fulisay Wasaaradda, si dadka naafada ah ay ula qabsadaan nolosha si adag. [More ...]
Muwaadiniinta Başkentray iyo Marmaray Miyay bilaash yihiin imaatinka ciidaha? waxay bilowday inay baarto. Inta lagu jiro bisha Ramadaan, duullimaadyada Baskentray iyo Marmaray waa bilaash. Laga bilaabo 23:2020 Sabtida, 00.00 Meey XNUMX (Jimcaha) [More ...]
Wasiirka Warshadaha iyo Teknolojiyadda Mustafa Varank, Madaxweynaha ayaa ku dhawaaqay in ay la wadaagi doonaan Istaraatiijiyadda Maalgashiga Ganacsiga ee Tooska ah ee Turkiga ee la soo gabagabeeyay dhowaan. Varank wuxuu yidhi, "Waxaan rabnaa inaan si dhakhso leh ugu dhaqaaqno natiijo iyo saameyn istiraatiijiyadeed ku jihaysan." muujinta [More ...]
Muddo 4-maalmood oo bandoow ah oo ay leedahay degmada Munnegöl, howlo dayactir ah ayaa kasii soconaya Wadada Masjidka Çardak, oo si weyn loogu soo gabagabeeyey shaqada qandho ee la soo gabagabeeyey 7/24. Gobolkii nidaamka nidaamka caqli galinta lagu adeegsado [More ...]
Sababo la xiriira cudurka 'coronavirus', qawaaniinta saacaddu waxay ka timid İZBAN oo ku saabsan bandoowga la adeegsan doono 23, 24, 25 iyo 26 May. Macnaha guud, saacadaha shaqada İZBAN waxay noqon doontaa sida soo socota:
Waa kuma Kamuran Yazıcı?
Kamuran Yazıcı, wuxuu ku dhashay Trabzon sanadkii 1967, wuxuu ka qalin jabiyay Jaamacada Farsamada ee Karadeniz, Kuliyada Injineerka iyo Architecture, waaxda injineeriyada shacabka 1988. Wuxuu ku qaatay shahaadada Master-ka ee Machadka Sayniska sanadkii 1991 isla isla jaamacaddaas. Master [More ...]
Agaasinka Guud ee Wasaaradda Amniga Gudaha, Taliyaha Guud ee Ciidamada Gendarmerie iyo cutubyo ka tirsan Ciidamada Ilaalada Xeebaha ee ka socda guud ahaan dalka ayaa si isku mid ah shalay gelinkii dambe 08.00-24.00 saac "Barnaamijka Kalsoonida ee Turkiga" ayaa la qabtay. Ficil ahaan, Ciidul Fitriga [More ...]
İsa Apaydın Yuu yahay?
Injineerka biraha, maamulaha guud, TCDD General Manager. Wuxuu ku dhashay Ankara 1965. Wuxuu ka qalin jabiyay Waaxda Farsamada Mashiinka ee Jaamacadda farsamada ee Istanbul 1987. Wuxuu shahaadada Masterka ku dhammaystiray waaxda injineeriyada macdanta ee Jaamacadda Sakarya sanadkii 1996. [More ...]